पाँच पटक प्रयास गरें आत्महत्याको
युवाका पीडा अनेक छन्, तीमध्ये लागूऔषध पनि एक हो। हजारौं नेपाली युवा लागूऔषधको दुष्चक्रमा फसे पनि उनीहरू कुन किसिमले बाँचिरहेका छन् भन्ने खोजीनीति भएको पाइँदैन। एकपल्ट लागूऔषधको लत लागेपछि युवक त्यसबाट हत्तपत्त उम्कन सक्दैन। त्यसले लागूऔषध प्रयोग गर्ने व्यक्तिको जिन्दगी बरबाद त हुन्छ नै, उसको व्यवहारले परिवार, समाज र देशलाई पनि गम्भीर असर पारिरहेको हुन्छ। [...]
राजेशकी प्रेमिका भन्छिन्,’उहाँलाई प्रेम गर्नै आउँदैन’
तपाईंको नाम ? मधु भट्टराई अनुहार त मंगोलको जस्तो देखिन्छ, नाम थर ढाँट्नुभएको हो ? होइन, ढाँट्ने भए यहाँ किन आउँथें र ? तैपनि मंगोल अनुहारको केही कारण त होला नि ? बुवाले अन्तरजातीय विवाह गर्नुभएको हो। घरमा को-को हुनुहुन्छ ? आमा र दुई भाइ। तीन वर्षदेखि राजेशजी तपाईंको चर्चा गरिरहनुभएको छ, तर तपाईं कतै [...]
-आङकाजी शेर्पा, महासचिव, आदिवासी जनजाति महासंघ साँघुमा आएको समाचारको विषयमा तपाईंको भनाइ के छ ? त्यो मेरो चरित्रहत्या गर्न लेखिएको समाचार हो । समाचार लेख्ने गोपाल बुढाथोकी त मेरो साथी नै हो । म उसलाई राम्रोसँग चिन्छु । त्यो एमालेको मान्छे हो । त्यही भएर त्यस्तो गरी समाचार लेखेको हो । चरित्रहत्या गरेको भन्नुभयो, मानहानीको [...]
मेरो आफ्नो इच्छाले मात्र यो पुस्तक (विनोद चौधरी) प्रकाशन गर्न लागेको होइन । म नेपालयसँग अनुबन्ध छु । उनीहरूले विनोद चौधरीको समग्र विषय समेटेर आत्मकथा प्रकाशन गर्नुपर्छ र यस्तो पुस्तकको आवश्यकता छ भन्ने ठानेर प्रकाशन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । मैले त्यही प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको हो । यसलाई कुनै उद्देश्यबाट निर्देशित भन्नुभन्दा पनि ५७ वर्षको जीवनमा कम्तिमा ३४ वर्षको [...]
‘कोठामा बसेर सेलिब्रिटी भइँदैन’
आन्दोलनमा तपाईं निकै सक्रिय हुनुहुन्छ त? हुनु परेन त? करिब एक महिनादेखि जारी यो आन्दोलनमा अमेरिकाबाट फर्कने बित्तिकै म संलग्न छु। आफ्नो क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। यसमा कुनै दलगत स्वार्थ मिसिएको छैन। समग्र फिल्म क्षेत्रको हितमा समर्पित छ आन्दोलन। मैले यो आन्दोलनमा अरु धेरै कलाकार साथीको अपेक्षा गरेकी थिएँ। उहाँहरु व्यस्त भएर आउन [...]
सन्तानको करियर बनाउन म भासिंएँ : सरोज खनाल (अभिनेता)
भिड देखि भिडसम्म फिल्मबाट नेपाली रजतपटमा प्रवेश गरेका कुनै बेलाका चर्चित अभिनेता सरोज खनालको नामलाई फिल्म उधोगले बिर्सन सक्ने छैन । ३२ वटा फिल्ममा उनले गरेको योगदानको अझै पनि चर्चा हुने गर्दछ । अझ भन्नु नै पर्दा चर्चित फिल्म प्रेमपिण्डमा उनले गरेको अभिनयको अझै पनि तारिफ हुने गर्दछ । बिगत १६ बर्ष देखि अमेरिकामा बस्दै आएका सरोज अब भने [...]
सन्नी लियोनीको ड्रिम गन्तव्य : सगरमाथा
नयाँ दिल्ली (एजेन्सी) -हिन्दुस्तान टाइम्सको साप्तिहक ब्रन्चमा सन्नी लिओनमाथि एउटा सटकट अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएको छ। यो अन्तर्वार्तामा उनलाई सोधिएको छ: तपाँइको स्वप्न गन्तव्य कुन हो? सगरमाथा ! भारतीय मुलकी क्यानडाकी यी पोर्नस्टारले सगरमाथालाई आफ्नो सपनाको गन्तव्य मानेकी छिन्। बलिउड मुलधारे फिल्म जम्न संघर्ष गरिरहेकी पोर्न स्टार के भन्छिन् त ? अहिलेको काम : रागिनी एमएमएस [...]
नाङ्गो शरिर हेर्दा मख्ख पर्छु:सविना कार्की
चलचित्र ‘दुलही रानी’बाट नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा भित्रिएकी नायिका हुन्, सविना कार्की। त्यसपछि एटिएम र द फेमसमा अभिनय गरिसकेकी छिन् कार्कीले । एटीएमका अश्लिल दृष्य र सम्बादमार्फत बिबादमा आएकी नायिका कार्कीसँग गरेको कुराकानी । चलचित्रमा आउनुको कारण ? सानैदेखिको चाहना रहर हो की वाध्यता हो सिनेमा क्षेत्र ? मेरा लागि चाहिं रहर चलचित्रमा नआएको भए के हुन्थ्यो [...]
निर्देशकले आँटे भने नग्न दृश्य पनि दिन तयार छु
नायिकाका रूपमा पूजनाको सार्वजनिक जीवन सुरु भएको १० वर्ष वित्यो। यसबीच उनी विभिन्न स्क्यान्डलमा मुछिइन्। उत्तेजक र कामुक दृश्य दिन अलिकति पनि नहच्कने पूजना कहिले नाम फेर्ने, कहिले विकनी लगाउने, कहिले नेटकर्किङ व्यवसायसँग जोडिने र कहिले साधिकाका रूपमा ध्यान गरिरहेकी भेटिने भएकाले पनि सञ्चारमाध्यममा छाइरहेकी छिन्। पछिल्लो समय चलचित्र रक्षामा उनले दिएको अन्तरंग दृश्य धेरैका [...]
रमिलालाई नै मीरा देख्छु-हरिवंश आचार्य
-हरिवंश आचार्य हरिवंश आचार्य, यस्तो नाम हो जसको अगाडि वा पछाडि परिचयको फुर्को झुन्ड्याउन आवश्यक छैन । देश-विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मन मुटुमा बस्न सफल यी कलाकार यतिखेर जीवनका कठिनतम् क्षण पार गरेर नयाँ जीवनका खुड्किला टेकिसक्नु भयको छ । यसै सन्दर्भमा आचार्यसँग कुराकानी- -दाइ, आरामै हुनुहुन्छ ? आरामै छु । -ढिलै भए पनि नयाँ वैवाहिक जीवनका [...]